बैंकहरुले धमाधम घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति,बिबरण सहित हेर्नुहोस् ? | सुदुरपश्चिम खबर
बैंकहरुले धमाधम घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति,बिबरण सहित हेर्नुहोस् ?
काठमाडौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक ब्याजदर अनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर झन् तल झारेका छन् । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै मुद्दति निक्षेपको माथिल्लो र बचतको न्यूनतम ब्याज बीचको अन्तर ५५ भन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याज धेरै तल नजाओस् भनेर उक्त नीति लिएको थियो ।
तर, यो नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्नु अगावै बैंकहरुले धमाधम मुद्दतिको ब्याजदर घटाउन सुरु गरेका छन् । मुद्दतिको ब्याजदर घटाइएकाले बचतको ब्याज बढ्ने सम्भावना पनि अहिललाई लगभग टरेको छ । यसअघि बचत खाताको ब्याजदर केही बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो ।
अहिले अधिकांश बैंकहरुले साधारण बचत खाताको ब्याजदर २५ भन्दा तल झारेका छन् । एनआइसी एसिया बैंकले त अझ १.५०५ मै झारेको बताएको छ । अधिक तरलताकाबीच राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर धेरै घट्न नदिनका लागि ल्याएको नीतिले खासै काम गर्ने देखिएको छैन । निक्षेपको ब्याजदर अझै घट्ने कि भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ ।
बैंक ब्याजदर घट्दा सेयर बजारलाई भने प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा आएका बेला सेयर बजार भने क्रमशः माथि जाने गर्छ । विगतका तथ्यांकहरुले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।
पुस १ गतेबाट लागू हुने गरेर एनआइसी एसिया बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले केही समय पहिले नै बचतको ब्याजदर १.५०५ मा झारेको थियो । त्यसैले अहिले बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर घटाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दति निक्षेपमा ६.५०५ सम्म ब्याज पाइनेछ । बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको आधार दर ६.५०५ छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचत खाताको न्यूनतम ब्याजदर २.२५५ र अधिकतम ४.२५५ निर्धारण गरेको छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर ९५ राखेको छ । ९५ ब्याज ५ वर्षभन्दा माथिका निक्षेपकर्तालाई मात्र हो । बैंकले एक वर्षे मुद्दतिको ब्याजदर ७.७५५ निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, ३ महिनाको मुद्दतिमा ५५ र ६ महिनादेखि १ वर्षको लागि ६.७५५ रहेको छ । यसको असोज मसान्तसम्मको बेस रेट ७.३४५ छ । यसैमा २५ देखि ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज १५ देखि ३५ तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ६५ र न्यूनतम ४५ निर्धारण गरेको छ । यता, बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको बेस रेट ८.३७५ छ । यसमा न्यूनतम १.५०५ देखि अधिकतम ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने बैंकले जनाएको छ ।
नबिल बैंकले बचतमा न्यूनतम १.५०५ देखि अधिकतम ३.५०५ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ८५ दिने भनेको छ । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७.५०५ मात्र छ । यता, बैंकको कात्तिक मसान्तसम्म बेस रेट ६.३७५ छ । यसमा ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । स्थिर ब्याजमा घर कर्जाको लागि बैंकले न्यूनतम ८.४९५ देखि ११.५०५ सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने बताएको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५०५ र अधिकतम ४.५०५ राखेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८५ कायम गरेको छ । ८५ ब्याज ३ वर्षदेखि माथिको मुद्दति निक्षेपका लागि हो । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे ७.५०५ छ ।
यता, बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको आधार दर ८.४३५ रहेको छ । यसमा ३५ देखि ६५ सम्म प्रिमियम थप गरेर विभिन्न कर्जा बैंकले दिइने बैंकको भनाई छ । यता, घर कर्जाको लागि ११.४९५ देखि १२.९९५ स्थिर ब्याज दर निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५०५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ६५ रहेको छ ।
एनएमबि बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर ३५ र अधिकतम ५५ तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८५ र न्यूनतम ५.७५५ निर्धारण गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको अधारदर ७.८५५ रहेको छ । यसमा अधिकतम ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम ९.२५५ देखि अधिकतम १२.२४५ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २५ र अधिकतम ४५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर ७.२५५ निर्धारण गरेको छ । यो ब्याजदर निश्चित क्षेत्रकाले मात्र पाउँछन् । आम सर्वसाधारणका लागि मुद्दतिमा अधिकतम ब्याजदर ७५ छ ।
असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ५.७४५ छ । यसमा अधिकतम ३.२५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिने जनाएको छ । बैंकले न्यूनतम ८.५०५ देखि अधिकतम ११५ सम्म ब्याजदरमा स्थिर कर्जा दिन्छ ।
नेपाल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २५ देखि अधिकतम ४५ सम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७५ तोकेको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.८१५ छ । यसमा १५ देखि ४.६६५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिन्छ । यता, स्थिर ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर ९.३५५ देखि १३.३५५ सम्म छ ।
कृषि विकास बैंकले बचतको ब्याज ३५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ७.२५५ कायम गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २५ देखि अधिकतम ४५ सम्म तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७५ तोकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.७३५ छ । यसमा अधिकतम ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५०५ देखि ४.५०५ सम्म निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८.५०५ निर्धारण गरेको छ । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज भने ८.२५५ छ ।
मेगा बैंकले बचतको न्यूनतम २.५०५ देखि अधिकतम ४.५०५ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ७.५०५ निर्धारण गरेको छ । यो एक वर्षभन्दा धेरै मुद्दति निक्षेपको लागि हो । कात्तिक मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ७.८०५ छ । यसमा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर ऋण प्रवाह गर्ने मेगाको भनाई छ ।
कुमारी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम १.७५५ देखि अधिकतम ४.५०५ ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५.५०५ देखि ७.५०५ सम्म ब्याजदर तोकेको छ । त्यसैगरी कर्जातर्फ विभिन्न प्रकारको लोनमा आधार दरमा अधिकतम ७५ सम्म प्रिमियम तोकेको छ । बैंकको कात्तिक महिनामा आधार दर ८.३०५ छ ।
सानिमा बैंकले बचतको ब्याज न्यूनतम २.५०५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको १०५ निर्धारण गरेको छ । यो ५ वर्षे मुद्दतिको ब्याज हो । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७५ छ ।
सिद्धार्थ बैंकले पुस महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचतमा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ४५ सम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ६५ देखि अधिकतम ७.५०५ सम्म ब्याजदर दिने भएको छ ।
यता, यसको कात्तिक महिनामा आधार दर ७.९८५ छ । बैंकले विभिन्न प्रकारका ऋण दिँदा आधार दरमा न्यूनतम ३.५०५ देखि अधिकतम ५५ सम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले बचतमा न्यूनतम २५ ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ८.५०५ ब्याज निर्धारण गरेको छ । यो ८.५०५ ब्याज २ वर्षमाथिको मुद्दतिका लागि हो । एक वर्षेको ब्याजदर ७५ छ ।
सनराइज बैंकले बचतमा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३.५०५ सम्म ब्याज दिने भएको छ । यता, मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७५ ब्याज निर्धारण गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको बैंकको आधार दर ७.५१५ रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिनेले अधिकतम १३.५१५ सम्म ब्याज तिर्नुपर्ने छ ।
बैंक अफ काठमान्डूले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचततर्फ न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ३.५०५ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५५ देखि ७५ ब्याजदर तोकेको छ ।
प्रभु बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ७.५०५ ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले बचत खातामा न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ५५ सम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ५.७५५ देखि ८५ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बैंकले आधार दरमा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ५५ सम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको कात्तिक महिनासम्मको आधार दर ७.२६५ छ ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर ३५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको ८५ तोकेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ४५ सम्म ब्याजदर तोकेको छ । मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ३ महिनाका लागि ६.५५ देखि ५ वर्षभन्दा बढीको हकमा ८.५५ ब्याज दिनेछ । बैंकको असोजसम्मको आधार दर ८.९५ छ । यसमा ५५ सम्म प्रिमियम थप गरेर बैंकले लोन दिन्छ । (nepalipaisa.com बाट साभार)